पायल्स,फिसर र फिस्टुलाको सफल उपचार, हवाई इन्टरनेसनल हस्पिटल प्राली मित्रपार्क, चाबहिल - HimalDarpan
पायल्स,फिसर र फिस्टुलाको सफल उपचार, हवाई इन्टरनेसनल हस्पिटल प्राली मित्रपार्क, चाबहिल
चाबहिल मित्रपार्क चोकमा रहेको नेपाल टेलिकमको भवन विपरीत एक अर्को भवन छ। जहाँ हवाई इन्टरनेसनल हस्पिटल सञ्चालनमा छ। उक्त अस्पतालमा बिना अप्रेसन पाईल्स, फिसर, फिस्टुलाको नयाँ र आधुनिक प्रबिधीबाट सफल उपचार भईरहेको छ।
मलद्वारमा हुने विभिन्न समस्याहरू जस्तै : रगत आउने, घाँउ हुने, सुन्नेको, दुखेको, मासु पलाएको, पिप आउने जस्ता समस्याको बिशेष प्रविधीको माध्यमबाट उक्त अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ।
दक्ष डाक्टरहरु द्वारा सफल उपचार हुने हवाई इन्टरनेसनल हस्पिटलमा आजकाल बिरामीहरुको भिड लाग्‍ने गरेको छ।
पायल्स, फिसर, फिस्टुला भएका बिरामीले यो फोन नम्बरमा ९८६४२५८२८३ सम्पर्क गरेर आफ्नो नाम दर्ता गर्न सक्ने छन्।
पायल्स, फिसर र फिस्टुला कस्तो रोग हो ?
पछिल्लो समय धेरै मानिसहरू पायल्स,फिसर र फिस्टुला जस्ता रोगबाट पीडित छन्। यो रोग मलद्वारमा हुने गर्छ।
डाक्टर अनुसार घरको खाना भन्दा धेरै बाहिरका खानेकुरा खानु। सागसब्जी तथा रेशायुक्त खानेकुरा कम खानु। पानी कम खानु । तारेको भुटेको, चिल्लो पिरो खानेकुरा धेरै खानु अर्थात् खानेकुराको मेल नभएपछि शरीरमा कब्जियत हुन्छ। कब्जियत हुँदा दिसा सुख्खा हुन्छ। बल गरेर शौच गर्नुपर्ने हुँदा मलद्वारका रक्तनलीहरू सुनिएर बाहिर आउँछन्। जसलाई पायल्स भन्ने गरिन्छ।
त्यस्तै दिसा गोटा पर्दा बलजफती शौच गर्न खोज्दा मलद्वार च्यातिन्छ र त्यसलाई फिसर भन्ने गरिन्छ। त्यस्तै मलद्वार च्यातिएर घाउ बनेको ठाउँमा पछि छालाको डल्लो थुप्रिनुलाई फिस्टुला भन्ने गरिएको छ। त्यसमध्ये सबभन्दा जोखिमयुक्त फिस्टुला हुने गर्दछ।
खाना र ट्वाइलेट व्यवस्थित नभएमा मलद्वार अन्तरगतका रोगहरू लाग्ने डा. ठाकुरले बताए। यस्ता रोगहरूबाट बच्न माछा मासु खान नहुने, खार्ने परे वाइल गरेको खाने, टिम्मुर, अदुवा जस्ता वस्तु नखाने, काँक्रा र सागपात बढी खाने, मध्यपान तथा धुम्रपान नगर्ने, शारीरिक व्यायम गर्नुपर्ने हुन्छ।
रोग लागेको आशंका हुनसाथ जहाँ पायो त्यही उपचार नगरी हवाई इन्टरनेसनल हस्पिटल आउनु भए बिशेष प्रविधीको माध्यमबाट उपचार गर्न अस्पताल तयार छ।
उपचारत बिरामी के भन्छन् त? हेर्नुहोस् भिडियो :
चितवनमा थपिए दुई संक्रमित